Nepal Auto | दैनिक १५ घण्टा विमानस्थल बन्द
दैनिक १५ घण्टा विमानस्थल बन्द3Mangshir, 2075
काठमाडौं - धावनमार्ग मर्मतका लागि पोखरा विमानस्थल दैनिक १५ घण्टा बन्द हुन थालेको छ । दिउँसो ३ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म विमानस्थल बन्द गरीएको छ ।
पोखरा विमानस्थलबाट अहिले दैनिक २ सय ६० उडान हुँदै आएका छन् । पोखराबाट दैनिक काठमाडौं, मुस्ताङ, भरतपुर, भैरहवा उडान हुँदै आएको छ । पोखराबाट बुद्ध एयर, यती एयर, सिम्रिक एयर, तारा एयर, नेपाल एयरलाइन्स लगाएतका कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।
नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १० वर्षपछि पोखरा विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत गर्न लागेको हो । धावनमार्गको ठाउँ-ठाउँमा चर्किने र गिटीहरू उप्किन सुरू भएपछि मर्मत गर्न थालिएको छ । दिउँसो ३ बजेदेखि राति १० बजेसम्म धावनमार्ग, पार्किङ क्षेत्र लगायतमा काम गर्ने र राति १० बजेपछि सुकाउने गरीएको छ ।
अव प्राधिकरणको योजनाअनुसार १५ दिनमा सबै काम सकिने छ । र त्यसपछि धावनमार्गभन्दा बाहिरको बाटो पिच गर्ने काम भने १ महिनासम्म चल्नेछ । धावनमार्गको मर्मत र थप पिच गर्नका लागि १ करोड ९० लाख खर्च अनुमान गरीएको छ ।
विश्वका प्रमुख अटो शोहरू
विभिन्न देशमा निश्चित समयमा विभिन्न प्रकारका अटो शोहरु भैरहेका हुन्छन् । यस्ता अ...
नयाँ गाडीमा नै वातावरण प्रदूषण
काठमाडौं— यातायात विभागले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सवारीको जाँच गरी वातावरण अ...
Suzuki’s New Dealer – Yaris Automobiles
VG Automobiles Pvt. Ltd. IsaSole Distributor of Suzuki2Wheelers for Nepal. N...